Alaabooyinka Co., Ltd.
Ace China waa mid ka mid ah alaab -qeybiyeyaasha ugu sarreeya Shiinaha ee wax -qabadka jaranjarada & balustrade -ka, daaqadaha & albaabbada, alaabta guriga loo habeeyay, badeecadaha qubeyska.
Hadafyada shirkadeenu waa inay siiyaan qalab dhisme oo ammaan ah oo caafimaad qaba nolosha guriga adduunka; Dhisidda astaanta dhoofinta hal-joogga ah ee agabka dhismaha ee ugu sarreeya.
Iyada oo saldhig adag ku leh adeegga macmiilka, meheradaha ACE Archive waxay bixiyaan khibrad dhammaystiran iyo alaabooyin caadooyin ah, iyagoo la socda isbeddellada deegaanka ee habaynta iyo qaab nololeedka.
ACE Archive waxay ku siisaa adeegyo alaab dhisme oo deggan oo ganacsi leh oo ku habboon baahiyahaaga iyo miisaaniyaddaada. Laga soo bilaabo jaranjaro ilaa balustrade iyo alaab guri oo la habeeyay, waxaan ballan qaadaynaa inaad si buuxda ugu qanacsan tahay adeegyadayada iyo alaabtayada.
Hadafkayaga lambarka koowaad waa qanacsanaanta macaamilka, waxaanan ku dadaalnaa inaan gaarno dhammaystir dhammaystiran wax kasta oo aan qabanno.
Waxaan ganacsi ku jirnay in ka badan 10 sano.
Waxaan hore uga soo shaqaynay 135 mashruuc oo laga fuliyay 56 dal; Waxaan si fiican u naqaanaa heerarka dhismaha ee degaankaaga.
Naqshad awood buuxda leh iyo kooxda injineerku waxay la-talin Nakhshadeed oo shakhsi ah siin karaan macmiil kasta.
Tayada badeecadaha waxaa kormeeraya Shaqaalaheena Xirfadlaha ah oo khibrad sanado badan u leh warshadaha.
Qiimaynta alaabta ceyriin oo adag, qalab horumarsan & farsamayaqaano farsamo oo aad u fiican taasoo keentay geedi socod cajiib ah.
Waxa Aan Kugu Bixinno
Jaantuska Wax -soo -saarka